Ama-Archives aqile - Mytika Speak
Ikhaya / kakhulu
Umaki - ukweqisa
Lapho othile ebabaza, ethanda izinto, ethanda, ebambelela, noma enomona, akhombisa izici ezimbi kakhulu. Ukubhema kuyedlulele ngoba kungaphezu ...
Abantu bazizwa lapho beba ngokweqile. Ukuzizwa weqise ngaphakathi kuvame ukuholela ekuziphatheni okwedlulele. Lapho ukuziphatha ngokweqile kuboniswa nge ...
Ukuqonda nokuzwelana komunye nomunye kuvumela abantu ukuthi baphakamise. Lokhu kubasusa kude ne-Extreme Ego. Ukuvimbela lokhu, i-Extreme Ego ...
U-Extreme Ego ukhangwa yimizwa engemihle. Idonswa kakhulu ngokwesaba futhi ichume lapho umuntu engaxhumekile ku-True Self yakhe. Lapho u-Ego ...
I-Extreme Ego izama ukungena kubantu ngokusebenzisa ukuboniswa ukukhomba izindawo ezibucayi zempilo yabo (abathandekayo, ubungcweti, ukungazethembi, njll.). Uma u...
Lapho befuna noma ikuphi ukweqisa, kufaka phakathi i-Extreme Spiritual, abantu banokuthambekela kokungalingani. Noma yini eshiya kude kakhulu nendawo yabo emaphakathi ...
Ungabona i-Extreme Ego ngokuthatha isikhashana ukubona ukuthi umzimba wakho uzizwa unzima yini. Ngokomzwelo, ungabona i-Extreme Ego uma okwamanje uzizwa ulahlekile ...
I-Extreme Ego iheha abantu ukuthi babanikeze ithuba lokunamathiselwe. I-Extreme Ego ingokomzimba futhi inokwazisa ngezinto eziningi ezahlukahlukene ...
Othile angashoshozelwa ngokweqile enganakile. Abantu bazama ukukholisana ukuthi baphila impilo endleleni efanele. Kuvuliwe ...
Ukwesaba, okwenziwe yi-Extreme Ego, yisona sizathu esikhulu esenza abantu bahlaselane. Lapho umuntu ehlasela, u-Ego wakhe wesaba ukuthi uma bengateleki, bazo ...